Singchụ ọdụ: Harry Potter na The Long Tail | Martech Zone
Singchụ ọdụ: Harry Potter na Long Tail
Saturday, July 29, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Saturday na-amalite site na nkwụsị m mgbe niile Ibe ala. M nyere iwu Google Map Hacks apụ nke Amazon ka m nwee ike ịrụ ọrụ na ntanetị oge ụfọdụ maka ResortPub na ngwụcha izu a. M nyere iwu 2-ụbọchị mbupu ma akwụkwọ ahụ abịarute… ọ na-esoro na Columbus, OH. Echere m na nke a bụ oge mbụ na enwetabeghị iwu m na Amazon na oge - na-atụ anya na ọ gaghị eme ọzọ.
Laghachi isi m… Anọ m ala ma m hụ akwụkwọ ahụ Ọ bụrụ na Harry Potter gbara ọsọ General Electric. Ana m agụ ugbu a Ogologo Ogologo ọ na-ekwukwa echiche na-akpali akpali na teknụzụ na-aga n'ihu na kọmputa, ịntanetị, na nkesa na-ebugharị ahịa nke ngwaahịa ndị na-anọghị na oke ogo. Ọ bụ nnukwu akwụkwọ. Ebe m gụrụ Fremanomics, nke a bụ otito zuru oke.
Ka m lere aha nke Ọ bụrụ na Harry Potter gbara ọsọ General Electric, Enweghị m ike ịchọpụta na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na onye edemede Tom Morris, ebe onye edemede guzobere nwere nnukwu nyocha, jiri ihe ịga nke Harry Potter mee ka akwụkwọ ya 'gbagoo ọdụ'. Ọbịa Amazon na-eme a search nke Harry Potter ga - ahụ akwụkwọ a na # 30 na nsonaazụ ọchụchọ ha. Harry Potter nwere ike ịbụ usoro akwụkwọ kachasị aga nke ọma na oge niile. Childrenmụaka na ndị nne na nna kwụ n'ahịrị na agụụ na-agụ akwụkwọ na-esote. Ka ha na-achọgharị Amazon, enweghị m ike ịjụ ma ọtụtụ puku n'ime ha zụrụ akwụkwọ a.
M na-na-achọ ịmata ma ọ bụrụ na nke a bụ ụma ahịa atụmatụ nke Mr. Morris na nkwusa! Na mkpokọta, edepụtara akwụkwọ ya na # 66,951 na Amazon ebe akwụkwọ ikpeazụ ya bụ # 154,295. Tom Morris ọ ghọrọ onye edemede kachasị mma na afọ 3 gara aga? Ma ọ bụ ka akwụkwọ ya chụrụ Harry Potter wee mee ka ọ gaa n'ihu The Long Tail?
Robert Scoble & Shel Israel kwuru banyere omume a na-ewere ọnọdụ na Mkparịta ụka gba ọtọ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ iche na enwere ike iji nke a mee ihe dị ka atụmatụ, agbanyeghị!
Ndi Indianapolis Star gbara enyo mgbe Mgbuzi Tolbert, onye onyoonyo
Aug 3, 2006 na 9: 41 AM
Ndewo Douglas! Daalụ maka ịchọta akwụkwọ ahụ! Agụbeghị m akụkọ ọ bụla gbasara akụkọ Harry Potter ruo ihe dị ka afọ 3 ma ọ bụ 4 gara aga, otu nwa okorobịa onye ọkà ihe ọmụma kpọrọ m ka m gwa ya ka m dee edemede maka akwụkwọ ọ ga-edezi - Harry Potter na Philosophy. Enweghị m oge iji were ọrụ ahụ, enweghịkwa mmasị na ya, mana ọ bụ nwa akwụkwọ nke otu n'ime ụmụ akwụkwọ ọkacha mmasị m ọkacha mmasị m, ya mere ka amara ya na onye nkuzi ya, onye ọ kpọbatara na-akpọ m maka oru ngo, M kwetara na ọ dịghị ihe ọzọ anya na mbụ ọkpụite akwụkwọ. Ejiri m ngwa ngwa, ma gụọ ha niile ugboro isii ọ bụla! Edere m edemede maka akwụkwọ prọfesọ na-eto eto wee kwụsị ịkwụsị ide ya. Enwere ọtụtụ nghọta dị ịtụnanya banyere ndụ na iduzi na akụkọ ndị a na-ewu ewu nke na ọ nweghị onye na-ekwu maka ha. N'oge na-adịghị anya, enwere m peeji 6 - akwụkwọ! Akpọrọ ya "Harry Potter na Ndụ nke Ndụ" mana onye editọ azụmaahịa kachasị elu, enyi nke onye nnọchi anya m, jidere ya, hụ ọkwa amamihe dị na ya, wee jụọ m ma m nwere ike ịgbanwe ya n'akwụkwọ ga-abu ihe ahia ahia dika ndu ndu. Enwere m obi abụọ na mbụ, mana mgbe m na-agụgharị ya kwenyesiri ike.
Mgbe m kụziri ihe na Notre Dame afọ 15 na ngalaba nkà ihe ọmụma, ugbu a, ana m agwa nnukwu ụlọ ọrụ azụmaahịa na mba niile okwu. Onye nchịkọta akụkọ Doubleday maara na aha azụmahịa ga-amasị ndị na-ege m ntị. O kwuru si "Onye ọ bụla nọ na Doubleday hụrụ akwụkwọ 1997 gị ọ bụrụ na Aristotle Ran General Motors anya yana onye ọ bụla CEO m maara, yabụ ị ga-adị njikere ịme aha yiri nke a?" M mere nza nke nnyocha na otú Doubleday, na anyị kwetara na Ọ bụrụ na Harry Potter Ran General Electric dị ka a fun ụzọ na-aga.
Ndị ụlọ ọrụ enyela iwu ọtụtụ puku akwụkwọ, ndị isi ụlọ ọrụ chịkọtara ya wee zụta ya maka akụkọ na mmezu ha niile, ma ugbu a, Harry Potter fandom achọpụtala ya. Ya mere, ọ bụ akwụkwọ mbụ m kemgbe 97 kụrụ ndepụta ndị kacha ere ahịa (oge ọkọchị a The Wall Street Journal, CEO Read, BookJive).
Ọ bụ ngwa ahịa na-atọ ụtọ - aha nke na-akọwa, na-akpali akpali, doro anya, na-atọ ọchị, nke na-amasịkwa akwụkwọ abụọ dị iche iche na-azụ ọha.
Na - n'agbanyeghị - Echere m na akwụkwọ ọ bụla m dere bụ nke kachasị mma m meworo, mana mgbe afọ ole na ole gachara, ahụrụ m ha niile n'anya dịka ụmụaka.
Daalụ maka ịchọta !!!!!
Jun 4, 2007 na 11: 11 PM
Hụrụ isiokwu a Harry Potter. Younu enyochala Harry Potter Forums Thats the first place that posted the news about the latest Harry Potter Movie, Harry Potter na Order nke Phoenix.